MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardData mm Archives - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
Category: Data mm
Daily Data Pack FAQS MM
PROMOTION » Daily Data Pack
Daily Data Pack ဆိုတာဘာလဲ? ဘယ်လိုဝယ်ယူလို့ရနိုင်မှာလဲ?
Daily Data Pack ဆိုတာ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်သော package များ ဖြစ်ပါတယ်။ Daily Data Pack အသစ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂၉၉ ကျပ် ၁၅၀ MB 1 ရက် *2001#
(ဆွေ/ရှယ်/ရွှေ) အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများနှင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ CDMA နှင့် Base Tariff အသုံးပြုသူများမှာ ဝယ်ယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ *224# ကို ခေါ်ဆိုပြီး Daily Data Pack ၏ လက်ကျန်ပမာဏကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
Author MPT TelecommunicationPosted on ဒီဇင်ဘာ 8, 2016 စက်တင်ဘာ 23, 2020 Categories Data mm, Promotion mm
Happy Friday FAQ MM
PROMOTION » Happy Friday Bonus
၁။ ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ စတင်မယ့် MPT ရဲ့Happy Friday အစီအစဉ်အသစ်မှာ ဘယ်လိုအပိုဆုတွေပါ၀င်ပါသလဲ။
• Happy Friday အစီအစဉ်အသစ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ပုံစံအသစ်နှင့် MPT ကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။
– သောကြာနေ့တွင် ခဲခြစ်ကတ်ဖြင့်ဖုန်းငွေဖြည့်ပါက ငွေဖြည့်လက်ဆောင် (မြန်မာကျပ်) ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
– သောကြာနေ့တွင် e-Top-up ဖြင့်ဖုန်းငွေဖြည့်ပါက ခဲခြစ်ကတ်ဖြင့် ငွေဖြည့်ခြင်း မှ ရရှိသည့်လက်ဆောင်ထက်ပိုမိုများပြားသော ငွေဖြည့်လက်ဆောင် (မြန်မာကျပ်)များ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၃။ Happy Friday အစီအစဉ်အသစ်မှာဘယ်သူတွေပါ၀င်နိုင်ပါသလဲ။
ရွှေစကား(သို့)ဆွေသဟာ(သို့) ရှယ်ပြော (သိ်ု့) Base Tariff အစီအစဉ်ရယူထားသော MPT: GSM/WCDMA Prepaid စနစ် အသုံးပြုသူများသည် သောကြာနေ့တွင် ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
(သို့)Base Tariff ငွေဖြည့်လက်ဆောင် (မြန်မာကျပ်) ခဲခြစ်ကတ်ဖြင့် ငွေဖြည့်ခြင်းမှ ရရှိသည့်လက်ဆောင်ထက်
CDMA – –
၅။ Happy Friday ငွေဖြည့်လက်ဆောင်တွေကို ဘယ်လိုအသုံးပြုနိုင်မှာပါလဲ။
Happy Friday ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ကို MPT ဖုန်းများသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့် SMS ပေးပို့ခြင်း၊ (Pay-As-You-Go) အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းတို့အတွက် သောကြာနေ့ ဖုန်းငွေဖြည့်ချိန်မှ တနင်္ဂနွေည အထိအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Happy Friday ငွေဖြည့်လက်ဆောင်၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးချိန်မှာ ငွေဖြည့်သည့်သောကြာနေ့နှင့် တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေည 23:59:59 နာရီအထိဖြစ်ပါသည်။
၇။ Happy Friday ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ရရှိရန် ငွေဖြည့်သွင်းနို်င်သည့်အကြိမ်အရေအတွက် ကန့်သတ်ထားခြင်း ရှိပါသလား။
ကန့်သတ်ထားခြင်းမရှိပါ။ သောကြာနေ့တွင် သတ်မှတ်ပုံစံအတိုင်းဖုန်းငွေဖြည့် သွင်းမှုအားလုံးအတွက် ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
၉။ MPT SIM Card အသစ်ကို စတင်အသုံးပြုပြီး သောကြာနေ့မှာဖုန်းငွေဖြည့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Happy Friday ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ကို မရရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်ပါလဲ။
• MPT SIM Card အသစ်စတင်အသုံးပြုသူများသည် SIM Card ကို Activate ပြုလုပ်ပြီးမှသာ ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်းဖြင့် အပိုဆုများရရှိနို်င်မည်ဖြစ်ပါသည်။
• SIM Card ကို Activate ပြုလုပ်ရန် – *124# ကို ရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆိုခြင်း(သို့မဟုတ်) ဖုန်းတစ်ကြိမ်ခေါ်ဆိုခြင်း။
၂။ သောကြာနေ့တွင် ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း ငွေဖြည့်လက်ဆောင် ဘယ်လောက်ရရှိမှာပါလဲ။
ငွေဖြည့်ရမည့်ပမာဏ (ကျပ်) ငွေဖြည့်လက်ဆောင်
ခဲခြစ်ကဒ်ဖြင့်ငွေဖြည့်ခြင်း e-Top up ဖြင့်ငွေဖြည့်ခြင်း
၅၀၀ – ၅၀ ကျပ်
၁၀၀၀ ၁၀၀ ကျပ် ၁၅၀ ကျပ်
၂၀၀၀ – ၃၀၀ ကျပ်
၃၀၀၀ ၄၅၀ ကျပ် ၇၅၀ ကျပ်
၄၀၀၀ – ၁၀၀၀ ကျပ်
၅၀၀၀ ၁၀၀၀ ကျပ် ၁၅၀၀ ကျပ်
၆၀၀၀ – ၁၈၀၀ ကျပ်
၇၀၀၀ – ၂၁၀၀ ကျပ်
၈၀၀၀ – ၂၄၀၀ ကျပ်
၉၀၀၀ – ၂၇၀၀ ကျပ်
၁၀၀၀၀ ကျပ်ငွေဖြည့်တိုင်း ၂၅၀၀ ကျပ် ၃၀၀၀ ကျပ်
– အခမဲ့ရရှိသောလက်ဆောင်များမှာ ထိုရက်သတ္တပတ်၏တနင်္ဂနွေနေ့အထိအကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။
မည်သူတွေအသုံးပြုနိုင်မှာလဲ – ရွှေစကား(သို့)ဆွေသဟာ(သို့) ရှယ်ပြော (သို့) Base Tariff အစီအစဉ်ရယူထားသော MPT: GSM/WCDMA Prepaid စနစ် အသုံးပြုသူများသည် သောကြာနေ့တွင် ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
၄။ Happy Friday ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ရရှိရန် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ငွေဖြည့်ရမှာပါလဲ။
• အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းများဖြင့်ဖုန်းငွေဖြည့်ပြီး အပိုဆုများရရှိနိုင်ပါသည်။
ငွေဖြည့်လက်ဆောင် (မြန်မာကျပ်) ခဲခြစ်ကတ်ဖြင့် ငွေဖြည့်ခြင်းမှ ရရှိသည့်လက်ဆောင်ထက်
(with pin number)
၆။ Happy Friday ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ဘယ်လိုစစ်ဆေးကြည့်နိုင်မှာပါလဲ။
1331 သို့ BAL ဟု စာတိုပေးပို့ုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ *124# ကိုရိုက်နှိပ်ခေါ်ဆို ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ရရှိထားသော Happy Friday ငွေဖြည့်လက်ဆောင်ကို စစ်ဆေးကြည့်နိုင်ပါသည်။
၈။ MPT ရဲ့Happy Friday အစီအစဉ်က ဘယ်အချိန်ကာလအတွင်းအကျုံးဝင်ပါသလဲ။
• သောကြာနေ့တိုင်းတွင် ဖုန်းငွေဖြည့်ပြီး Happy Friday အစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်နိုင် ပါသည်။
• အစီအစဉ်နှင့်ပတ််သတ်၍ ပြောင်းလဲမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိလျှင် MPT က ထပ်မံ ကြေညာပေးပါမည်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 29, 2016 ဇွန် 14, 2018 Categories Data mm, Promotion mm
Social Pack Promotion MM
PROMOTION » Social Pack Promotion
၁။ Social Pack ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယ်လိုဝယ်ယူလို့ရနိုင်မှာလဲ?
Social Pack ဆိုတာ social application များဖြစ်သော Facebook, Messenger, Viber, LINE နှင့် Instagram တို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်သော package များ ဖြစ်ပါတယ်။
Social Pack အသစ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နှုန်းထား (၅% ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ပါဝင်ပြီး)
၁၉၉ ကျပ် 190MB ၂ ရက် *3001# *3333#
၉၉၉ ကျပ် 950MB ၇ ရက် *3002#
၂၉၉၉ ကျပ် 2,850MB ၃၀ ရက် *3003#
၂။ Social Pack အသုံးပြုရာတွင် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ ရှိပါသလား?
ထို social application များမှတဆင့် external link များ၊ VoIP နှင့် voice call များအတွက် အသုံးပြုလျှင် သုံးစွဲသူများ ရယူထားသော အစီအစဉ်များ၏ သုံးသလောက်ပေး အင်တာနက်နှုန်းထားအတိုင်း ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ Social Pack ကို ဘယ်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
(ဆွေ/ရှယ်/ရွှေ) အစီအစဉ် ရယူထားသော GSM/WCDMA အသုံးပြုသူများနှင့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသူများ ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ CDMA နှင့် Base Tariff အသုံးပြုသူများမှာ ဝယ်ယူနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
၄။ Social Pack ရဲ့လက်ကျန်ငွေကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မှာလဲ?
*224# ကို ခေါ်ဆိုပြီး Social Pack ၏ လက်ကျန်ပမာဏကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
၅။ Social Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
Package များကို တစ်ရက်လျှင် အများဆုံး ၅ ကြိမ်အထိ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဒေတာသက်တမ်းများကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၆။ ပရိုမိုးရှင်းကာလက ဘယ်အထိလဲ?
ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၁၈၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက် မှ စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ရပ်ဆိုင်းခြင်းပြုလျှင် ကြိုတင်အသိပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 29, 2016 ဇွန် 25, 2018 Categories Data mm, Promotion mm
Night Time Data Package MM
PROMOTION » Night Time Data Package
၁။ Night Time Data Pack ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယ်လိုဝယ်ယူလို့ရနိုင်မှာလဲ?
Daily Data Pack ဆိုတာ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် ည ၁၁ နာရီမှ မနက် ၇ နာရီအတွင်း အသုံးပြုနိုင်သော package များ ဖြစ်ပါတယ်။
Night Time Data Pack အသစ်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၆၉ ကျပ် ၁၅၀ MB ၁ ည *237*1#
၈၉၉ ကျပ် ၈၀၀ MB ၇ ည *237*2#
၃၄၉၉ ကျပ် ၃,၂၀၀ MB ည ၃၀ *237*3#
၂။ Night Time Data Pack ကို ဘယ်သူတွေ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
၃။ Night Time Data Pack ရဲ့လက်ကျန်ငွေကို ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မှာလဲ?
*224# ကို ခေါ်ဆိုပြီး Night Time Data Pack ၏ လက်ကျန်ပမာဏကို စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
၄။ Night Time Data Pack ကို အကြိမ်အရေအတွက် ဘယ်လောက်ထိ ဝယ်ယူနိုင်မှာလဲ?
ပမာဏတူ package များကို အများဆုံး ၅ ကြိမ်အထိသာ ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဒေတာသက်တမ်းများကို ပေါင်းစည်းအသုံးပြုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
၅။ ပရိုမိုးရှင်းကာလက ဘယ်အထိလဲ?
ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၁၈၊ မတ်လ ၈ ရက်မှ စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ရပ်ဆိုင်းခြင်းပြုလျှင် ကြိုတင်အသိပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Author MPT TelecommunicationPosted on စက်တင်ဘာ 29, 2016 မတ် 12, 2018 Categories Data mm, Promotion mm